Wmv waa qaab caan video loo isticmaalo Windows OS, taas oo ah mid aad u la socon nidaamka qalliinka taasi ay sabab u sameeysa la mid ah iyaga waxay leeyihiin. Iyadoo MPEG (sidoo kale loo yaqaan Mpg), qaab file kale, waa kordhin file ah MPEG-1 iyo MPEG-2, inta badan loo isticmaalo badbaadinayo datas warbaahinta u TV, DVD iyo wixii la mid ah. MPEG, in dhibic ka mid ah, waxaa laga garan karaa barnaamijyadooda ka badan sida QuickTime. Akhri farqiga u dhexeeya taxane MPEG .
Maqaalkani waa dhan oo ku saabsan diinta wmv in MPEG ee Mac OS Windows iyo OS. Si loo ilaaliyo tayada video ah oo si deg deg ah ku dhameysan hawsha, waxaan ku xushay wmv ugu wanaagsan ee MPEG Converter aad u. Just aad u hesho hoos ku qoran.
Qeybta 1: Best wmv in MPEG (MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-3 / MPEG-4) Video Converter
Qeybta 2: wmv Free in MPEG Converter &
Qeybta 3: Online wmv in Converter MPEG
Qeybta 4: Su'aalaha ku saabsan diinta wmv in MPEG
150+ Video Qaabka: Waxa ay taageertaa diinta MPEG, MKV, MOV, MP4, AVI iyo qaabab badan si ay wmv.
Output High Qualilty: Beddelaan wmv in MPEG aan khasaaro tayada wax qeexidda iyo sare.
Guba DVD: Gubashada video inay DVD disk, riyaaqayaa aad DVD masterpiece saaxiibadaa.
Faa'iido leh Function ayeey: Edit videos la function video tafatirka weyn sida falinjeeerka, biirtay, isagoo intaa ku daray saamaynta iyo ka badan.
Donwload Online Videos: Donwload videos ka goobo badan oo video qaybsiga caanka ah sida YouTube, Facebook, iwm
Fiiro gaar ah : Barnaamijku wuxuu soo socda aad u muujinaysaa sida ay u badalaan wmv in MPEG in Windows, iyo in la sameeyo wmv in hawsha MPEG Mac, waxaad ka akhrisan kartaa taasi: User Guide of Video Converter u Mac (Mac OS X 10.11 El Capitan, 10,10 Mavericks ka mid ah).
Sida loo badalo wmv in MPEG (MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-3 / MPEG-4) Iyadoo Wondershare Video Converter
1. Import videos in wmv in Converter MPEG
Orod wmv in ay MPEG video Converter, guji "Add Files" iyo dar videos aad rabto in aad si loogu badalo. Si aad ku dari files wmv barnaamijka, waxaad kale oo jiidi karaan & hoos u files si aad u Converter ah wmv in MPEG. Si loo badbaadiyo waqtiga aad, diinta Dufcaddii waxaa taageera si aad u dajiyaan karaa in ka badan badan files warbaahinta galay software ah ee diinta.
2. Set MPEG-1 ama MPEG-2 sidii qaabab wax soo saarka
Riix ah "Qaabka Output" image icon ka dibna dooro MPEG sida qaab wax soo saarka.
Fiiro Gaar ah: Waxa kale oo aad ka heli kartaa optimizations qalabka la qaadi karo by clicing button marsho ah. Tusaale ahaan, haddii aad isku dayayaan in ay badalo wmv si iPhone qaabab video, waxaad dooran kartaa ayna saxda ah iPhone iyo dhigay profile saarka sidan oo kale ah:
3. Ku bilow si loogu badalo wmv in MPEG
Guji "Beddelaan", iyo inta kale ee wmv in beddelaad MPEG si toos ah la dhamaystiri doono. Waxaad ka heli kartaa la gediyay videos adigoo gujinaya "Open Folder".
Qeybta 2: fursadaha More ah oo lacag la'aan ah YouTube in Converter wmv
# 1. Free Video Converter: Wondershare Free wmv in MPEG Converter
Tani wmv si xor ah u Converter MPEG aad ogolaanaysaa wmv diinta si xor ah u MPEG, xaalkaa wmv videos hor diinta iyo sidoo kale kala soo bixi videos ka goobood oo badan.
Pro: 100% wmv si xor ah u MEPG qalab diinta iyo video downloader
1. The video tayo leh la gediyay ma u fiican yahay sida Video Converter Ultimate.
2. Function DVD gubashada aan la heli karin.
3. Waxa keliya oo loo isticmaali karaa si loogu badalo video si caadi video, halka Video Converter Ultimate waxaa loo isticmaali karaa si loogu badalo in ay HD iyo 3D videos.
Qeybta 3: Online YouTube in Converter wmv
1. Waxaan sameeyey video ah oo la Windows Movie abuuray. Sidee ayaan u ciyaari karo files wmv la ciyaaryahan DVD / VCR.
Si aad u ciyaaro videos on ciyaaryahan DVD / VCR, in aad marka hore u baahan tahay si loogu badalo files wmv in MPEG, competible qaab la qalab aad ka.
Isku day converters video kor ku xusan sida ugu dhakhsaha badan si uu u xaliyo dhibaatada. Haddii aad rabto in aad ku raaxaysan videos difinition sare iyo waayo-aragnimo loo maqli siman, aad si fiican isku dayi lahaa Wondershare Video Converter Ultimate .
2.I'm la yaaban yihiin sida ay u badalaan filimada DVD in ay wmv ama MPEG sidaas darteed waxaan email u diri kartaa ama iyaga xaalkaa barnaamijka Kan sameeyey Movie ah.
Way fududahay in la dhammeeyo ilaa. Isku day qalab diinta video ah si loogu badalo videos in MP4, qaabka ugu socon kara qalabka iyo codsiyada badan.
Haddii aad looing wax lacag la'aan ah. Wondershare Ayaa wmv in MPEG Converter FREE noqon kartaa doorashada ugu fiican ee aad. Waxaad isticmaali kartaa si loogu badalo DVD filimada in AVI, MKV, MP4, wmv, MOV oo kale qaabab video oo caan ah.
3. Ma jiraa freeware ah si loogu badalo files wmv in la Lugood, Mac iyo iMovie shaqeeyaan.
Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in ay files wmv ah ka shaqeeya Windows OS inuu u ciyaaro aad Lugood, Mac OS ama iMovie. Si fiican uguna habboon xal u dhibaatadaada, kaliya qaataan mid ka mid ah converters video kor ku xusan oo loogu badalo wmv in MOV ama MP4, qaabka la jaan qaada saddex dhan.
4. Waa maxay farqiga u dhexeeya MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4, iyo MP4.
MPEG-1 waa qarni hore ee faylka weelka (oo qaban video / audio) iyo video / codecs audio. Waxaad ka heli doontaa, kuwaas oo ku saabsan 'CD multimedia' jir iyo faylasha sida .mpg internet-ka.
MPEG-2 waa qarni ka dib, iyo MPEG-2 files yihiin halkii waaweyn, si ay inta badan loo isticmaalo dhamaadka sare video tafatirka. MPEG-2 waa qaab hooyo ee DVD.
MPEG-3 la joojiyey, oo aan marnaba la sii daayay.
MPEG 4-waa qarni ugu dambeeyey, oo ku badan tahay oo ku saabsan internetka. DivX iyo XviD waa kuwa ugu khayr MPEG-4 video encoders (weel AVI). MP4 iyo MPEG 4-waa isku mid. MP4 waa soo gaabiyay ee MPEG-4.
Sida loo Beddelaan Video inay Blackberry Phone ee Mac / Windows
Sida loo Beddelaan wmv si iPhone (iPhone 5 / 5s mid)
Sida loo badalo M2TS in MKV aan khasaaro
Top 3 AVCHD converters for Windows iyo Mac
Sida loo Encode Xvid Faylal ay la Xvid Encoder
Sida loo Beddelaan QuickTime MOV in regelingen (Yosemite ka mid ah)
Sida loo Beddelaan FLV in MPEG
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan wmv in MPEG (MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-3 / MPEG-4) ee Mac / Windows